🥇 ▷ Safarka Mario Kart Tour wuxuu ku imaan doonaa Android goor dhow: taariikhda siideynta ✅
Safarka Mario Kart Tour wuxuu ku imaan doonaa Android goor dhow: taariikhda siideynta
Nintendo wuxuu bilaabayaa qaar ka mid ah cayaaraha ugu caansan ugudambaysta qalabka Android iyo macruufka. Bilo yar ka hor, Dr. Mario World ayaa lagu dhawaaqay, mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan oo hadda laga heli karo bilaash aaladda oo dhan. Hadda, shirkadda Mario ayaa ku dhawaaqday imaatinka Mario Kart Tour. Tani waa taariikhda ay sii deysay Android iyo macruufka.
Ciyaartan fiidiyowga orodka ah waxay aad ugu egtahay midkii hore ee Mario Kart, laakiin la dhaqan galinta aaladaha cusub ee mobilada iyo marxaladaha cusub. Waxaan u soo bixi karnaa heerar maadaama aan ku guuleysano tartamo oo aan la tartanno asxaabteena ama qoyskeena qaabab kala duwan. Nintendo wuxuu ku dhawaaqay in diiwaangelinta ciyaartaan ay hadda ka heli karto Android. Taasi waa, waad iska qori kartaa si aad u hesho ogeysiinta mar la helo. Mario Kart ayaa la soo dejisan karaa 25ka Sebtember ee soo socota. Taariikhda is-diiwaangelinta iyo taariikhda bixitaanka ayaa sidoo kale ah isla macruufka.
Mario Kart Tour wuxuu lahaan doonaa isla farsamooyinka iyo xulashooyinka ciyaarta fiidiyowga asalka ah. Waxaan lahaan doonnaa khariidado la mid ah, suurtagalnimada tuurista walxaha, qalfoofka ama joojinta khariidadaha qaar. Sida aan ugu guuleysanay tartamada waxaan furi doonaa heerar kala duwan iyo khariidado. Dabcan, waxaan rajeyneynaa inaan aragno qaar ka mid ah xulashooyinka lacag bixinta, sida caadiga ah ciyaaraha Nintendo moobilada.
Nintendo wuxuu qabtaa shaqo aad u wanaagsan isagoo u keenaya ciyaaraha ugu caansan Android. Looma baahna in la iibsado qalab koronto si aad ugu raaxeysato qormooyinkaan, iyo iyada oo la tixgelinayo in soo saareyaal badan ay soo bandhigaan waxyaabaha loogu talagalay ciyaaraha, moobiilku wali waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay madaddaalada isticmaalaha.
Macluumaad dheeri ah: Nintendo.